IVA 9T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- IVA 9T
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရခေဲထုတျစကျ ,	၄၀,၀၀၀ USD ဒျေါလာအောကျ
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA9T
IVA9T 9ton exported ice making machine (100% New) is supplied with high quality and at the most competitive price in the market.
IVA9T ၉ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)ကို အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ ကွာလတီနဲ့ ဈေးကွက်မှာ အသက်သာဆုံး ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
Video of producing an IVA 9ton Stainless Steel Tube ice making machine
Currently, along with the increasing demands for purified ice, the customer's requirements for the quality of purified ice are also rigorous. However, inferior quality products are rampant in the market. Understanding this actual situation, as one of the leading companies in supplying high-quality ice machines, Viet An has researched and developed IVA9T exported stainless steel tube ice-making machines (100% New) to meet customers’ demands.
ယခုအခါမှာ ရေသန့်ရေခဲကို မှီခိုလာရတာနဲ့အမျှ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ရေသန့်ရေခဲရဲ့ ကွာလတီက အရမ်း တင်းကြပ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အရည်အသွေးနိမ့် ပစ္စည်းတွေလည်း ဈေးကွက်မှာ ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ Viet An က အရည်အသွေးမြင့် ရေခဲစက်တွေကို ပေးပို့တဲ့ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တာနဲ့အညီ ဝယ်ယူသူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် IVA 9T တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)တွေကို ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Besides, Viet An's IVA9T - 9ton Ice-making machine, withalong shelf life of more than ten years, the engine will help the customers increase the benefits much more than the products’ initial value. In response to the increasing demands forasuitable ice-making machine to generate safety ice products that are safe for the customers’ health, Viet An’s IVA9T - 9ton ice-making machine will be the smartest choice for you. To get insights into this machine, let’s read the article below!
ထို့အပြင် ၁၀ နှစ်ကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ Viet An ရဲ့ IVA 9T ၉ တန် ရေခဲထုတ်စက်နဲ့ဆိုရင် အင်ဂျင်က ဝယ်ယူသူတွေကို ပစ္စည်းရဲ့ ဦးဆုံးတန်ဖိုးထက် အကျိုးအမြတ်ပိုတိုးစေပါတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ရေခဲတွေကို ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ Viet An ရဲ့ IVA 9T ရေခဲထုတ်စက်က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိဖို့ အောက်ကဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။
With its compact design and the advanced technology application, the IVA9T - 9ton ice-making machine can smooth operation, energy-saving, and accessibility. Also, the engine replaced components are sufficient and easy to access. Especially with its convenient design, it is easy to operate the machine. The machine also requires low maintenance fee thanks to its long durability.
၄င်းရဲ့ သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်း၊ ခေတ်ရှေ့ပြေးသော နည်းပညာကြောင့် IVA 9T ၉ တန် ရေခဲထုတ်စက်က ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်ခြင်း၊ အင်နာဂျီ ချွေတာခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ကလည်း လွယ်ကူစွာ လည်ပတ်နိုင်ဖို့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အစားထိုးပေးပါတယ်။ ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းကြောင့် စက်က လွယ်ကူစွာ လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ စက်က အချိန်အကြာကြီး ခံတာကြောင့် ထိန်းသိမ်းခလည်း နည်းပါတယ်။
IVA9T 9ton exported stainless steel ice making machine (100% New)
IVA 9T ၉တန် တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA9T 9ton isahigh capacity ice-making machine capable of producingalarge amount of purified ice, meeting food hygiene and safety standards quickly.
IVA 9T က ရေခဲအမြောက်အမြားကို စံချိန်စံနှုန်းများနဲ့ ကိုက်ညီစေကာ ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။
The finished products satisfy the below requirements: Among 40 criteria on heavy metals, the finished ice products meet 22 criteria. Six standards are on microorganisms and bacteria to be certified by the Department of Health. The customers will surely satisfy with our product quality as well as our consultation, maintenance services.
ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေက အောက်ပါ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်ပါတယ်။ ကြီးမားသော သတ္တု အမျိုးအစား အခု ၄၀ ကြားမှာ ၂၂ ခုနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ မိုက်ခရိုသက်ရှိနဲ့ ဘက်တီးရီးယားရဲ့ စံနှုန်း ၆ ခုနဲ့ ညီပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ လက်မှတ် ရရှိထားပါတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေက ကျွန်တော်တို့ ပစ္စည်းရဲ့ ကွာလတီ၊ ဆွေးနွေးပေးမှု၊ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးမှုတွေကို ကျေနပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
IVA Stainless Steel Tube ice-making machine consists of the main components: blade set, ice discharger, ice mold, line components, icy water supply tank, bucket system, and ice tank. These components are made from stainless steel and are 100% new to avoid corrosion and extend the machine shelf life.
IVA စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်မှာ ဓားအတွဲ၊ ရေခဲဖြုတ်စက်၊ ရေခဲပုံစံခွက်၊ လိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ၊ ရေခဲရေ ပေးပို့သော တိုင်ကီ၊ ပုံးစနစ်၊ ရေခဲတိုင်ကီတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး သံချေးမတက်စေတဲ့ ၁၀၀% သစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စက်ရဲ့ သက်တမ်းရှည်ပါတယ်။
Thanks to an automatic and closed manufacturing process, the finished products are ensured to be clean and safe to the customers’ health. Last but not least, Viet An’s ice-making machines operate stably and generate high efficiency. The installation and maintenance processes are also convenient thanks to the machines’ smart design. However, forasmooth operation later, make sure you have read through all technical specifications below.
အော်တို သီးသန့် လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီစေပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေက တည်ငြိမ်စွာ လည်ပတ်ပါတယ်။ စက်ရဲ့ စမတ်ကျသော ဒီဇိုင်းကြောင့် တပ်ဆင်ခြင်းနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွေက အဆင်ပြေစေပါတယ်။ သို့သော်လည်း နောက်ထပ် ချောမွေ့သော လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များကို ဖတ်သင့်ပါတယ်။
Currently, in the market, Viet An is offering ice-making machines at the highest prices. You must be wondering why our machines have such high prices? That is because we apply exclusive and 100% new for all the components. Our article below will give you insights into this.
ယခုအခါ ဈေးကွက်မှာ Viet An မှ ၉ တန် ရေခဲထုတ်စက်များကို ဈေးကြီးစွာ ရောင်းချနေပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဈေးကြီးလဲဆိုတာ သင်သိချင်ပါသလား။ အောက်က ဆောင်းပါးက ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။
Unique advantages that only Viet An's 9ton exported stainless steel ice-making machines (100% New) have
Viet An ရဲ့ IVA 9T ၉ တန် တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)တွင် ရှိသော ထူးခြားသော ကောင်းကျိုးများ
Viet Ans’s industrial 9ton ice-making machines are the unique machines consisting of 100% new components.
Viet An ရဲ့ စက်ရုံသုံး၈ တန် ရေခဲထုတ်စက်တွေက ဈေးကွက်မှာ ၁၀၀% သစ်သော အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စံဖြစ်သော စက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
We apply the most advanced and exclusive technology to our ice-making machines. Exclusive ice-making technology, which is only available in Viet An. Energy-saving.
ကျွန်တော်တို့က ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာ ခေတ်ရှေ့ပြေးသော အထူးသီးသန့် နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါက Viet An မှာသာလျှင် ရနိုင်ပါတယ်။ အင်နာဂျီ ချွေတာနိုင်တယ်။
The compressor (100% New) applied the most advanced technology. Energy-saving.
ဖိသိပ်စက် (၁၀၀% အသစ်)မှာ ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသဖြင့် အင်နာဂျီကို ချွေတာပေးပါတယ်။
အရည်နဲ့ အငွေ့ ခွဲထုတ်ပေးသော စနစ်က လိုင်းအလျားကို လျှော့ပေးပြီး ရေခဲထုတ်လုပ်ခြင်းကို အချိန်နည်းစေကာ အင်နာဂျီကို ချွေတာပေးပါတယ်။
Condenser and Cooling tower (100% New) are directly imported from the developed countries with the most advanced technology, enabling energy and cost-saving.
အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာနှင့် အေးစေသော တာဝါ (၁၀၀% အသစ်) ကို ခေတ်ရှေ့ပြေးသော နည်းပညာနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် နိုင်ငံများမှ တင်ပို့ထားပြီး ငွေကြေးနှင့် အင်နာဂျီ ချွေတာနိုင်ပါတယ်။
An automatically programmed electrical system that can instantly and smoothly operate with only one on/off button and automatically stop when there is an electrical problem.
အော်တို ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ထားသော လျှပ်စစ်စနစ်က ခလုတ် အဖွင့်အပိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အတူ လျှပ်စစ်ပြသနာပေါ်ပေါက်တဲ့အခါ စနစ်က အော်တိုရပ်သွားပါတယ်။
ရေစုပ်စက် (၁၀၀% အသစ်) ကို အထူးသီးသန့် နည်းပညာနဲ့အတူ 304 စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
The bucket charging motor - blade set is 100% new.
ပုံးအားသွင်းမော်တာနဲ့ ဓားအတွဲက ၁၀၀% အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။
The compressor’s electronic valve system is imported from the Danfoss company in Finland.
ဖိအားသိပ်စက်ရဲ့ အီလက်ထရောနစ် အဆို့စနစ်ကို Finland မှာ ရှိတဲ့ Danfoss ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းထားပါတယ်။
Compressor (lock) (100% New)
ဖိသိပ်စက် (သော့ခတ်ထားသော) (၁၀၀% အသစ်)
All of our compressors are produced in foreign countries under strict quality control. It is manufactured in an automatic CNC system with automatic cutting, pressing, and molding processes. After that, it is transferred to the high-pressure testing machine - the best high-pressure testing machine imported from German.
ယခုအခါမှာ Viet An ကသာ ရေခဲထုတ်စက်တွေထဲမှာ ဖိသိပ်စက်အသစ်ကို အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖိသိပ်စက်တွေကို နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ကြာရှည်အခံနိုင်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို အော်တို ဖြတ်တောက် ဖိသိပ် ပုံသွင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါတဲ့ လုံးဝ အော်တို CNC စနစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဖိသိပ်စက်တွေရဲ့ လျှပ်စစ်အဆို့စနစ်ကို Finland မှာရှိတဲ့ Danfoss ကုမ္ပဏီကမှ တင်သွင်းထားပါတယ်။
New liquid and gas separation system
အရည်နှင့်အငွေ့ ခွဲထုတ်ပေးသော စနစ် အသစ်
Only in Viet An, we applya100% new liquid and gas separation system for the ice making. The air compressor is used for the ice-making machine. It absorbs cold air and exhausts hot air. The liquid and gas separation system is designed to separate the liquid from the inlet air to ensure no liquid remains in the air before it is routed into the airline for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life. As you might know, the ice-making machines using old technology often have lengthy designed lines. However, with Viet An’s innovation, the traditional lines have been improved to be much more compact and convenient.
Viet An ကသာလျှင် ရေခဲထုတ်ရာတွင် အရည်နဲ့ အငွေ့ ခွဲထုတ်ပေးသော စနစ် ၁၀၀% အသစ်ကို အသုံးပြုပါတယ်။ လေဖိသိပ်စက်ကို ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုပါတယ်။ သူက လေအေးကို စုပ်ယူပြီး လေပူကို စွန့်ထုတ်ပါတယ်။ အရည်နှင့် အငွေ့ခွဲထုတ်ပေးသောစက်ကို လေလက်ကြားမှ အရည်တွေကို ခွဲထုတ်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒါမှ လေလမ်းကြောင်းမှာ မလည်ပတ်ခင် လေထဲတွင် အရည်မကျန်မှာ သေချာစေပါတယ်။ သို့မှသာ စက်က ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး သက်တမ်းကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သိတဲ့အတိုင်း နည်းပညာအဟောင်းကို အသုံးပြုတဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေက လိုင်းအလျားရှည်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း Viet An ရဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကြောင့် လိုင်းတွေက ပိုမို သိပ်သည်းပြီး အဆင်ပြေလာပါတယ်။
Condenser and Cooling tower (100% New)
အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသော စက်နှင့် အေးစေသော တာဝါ (၁၀၀% အသစ်)
Image of the Condenser used in the ice-making machine
ရေခဲထုတ်စက်တွင် အသုံးပြုသော အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် စက်၏ပုံ
Image of the Cooling tower used in the ice-making machine
ရေခဲထုတ်စက်တွင် အသုံးပြုသော အေးစေသော တာဝါ၏ပုံ
The components of the Condenser and Cooling tower used in the ice-making machine are imported and assembled by Viet An, ensuring the finest quality and the most competitive price,
ရေခဲထုတ်စက်တွင် အသုံးပြုသော အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာနှင့် အေးစေသောတာဝါ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို Viet An မှ တင်ပို့တပ်ဆင်ထားပြီး အကောင်းဆုံးသော ကွာလတီနဲ့ အချိုသာဆုံးဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
The electrical system used for Viet An’s ice-making machines is automatic. The device will immediately start with only one on/off button. The operation process will automatically stop when there is an electrical problem incurred. Thus, you can feel secure with Viet An’s ice-making machine.
ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုတဲ့ လျှပ်စစ်စနစ်က လုံးဝကို အော်တိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ စက်က ခလုတ်အဖွင့်အပိတ် တစ်ခုတည်းနဲံ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ စနစ်က လျှပ်စစ်ပြသနာ ပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမှာ ချက်ချင်း ရပ်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်နဲ့ဆိုရင် သင်လုံခြုံမှုကို ခံစားရမှာပါ။
Stainless Steel pump system
The pump system used in Viet An’s tube ice making machine is made from stainless steel. It isaCBU (Completely Built-Up) product imported by Viet An. Currently, the stainless steel pumps are only applied in Viet An’s ice-making machines. For other manufacturers, the pump systems are made of cast iron with lower prices and shorter durability.
ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ရေစုပ်စက်စနစ်ကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါက အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး Viet An မှ တင်သွင်းထားပါတယ်။ ယခုအခါမှာ စတိန်းလက်စ်စတီးရေစုပ်စက်တွေကို Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာသာ အသုံးပြုပါတော့တယ်။ အခြား ထုတ်လုပ်သူတွေ အနေနဲ့ကတော့ ရေစုပ်စက်တွေကို ဈေးပေါတဲ့ သံကြွပ်တွေနဲ့သာ ပြုလုပ်ကြပြီး ကြာရှည်လည်းမခံပါဘူး။
Bucket charging motor - blade set
ပုံးအားသွင်းမော်တာ-ဓားအတွဲက ၁၀၀% အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။
We have researched and designed the exclusive components used for our ice-making machines to create our brand equity.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ကို ဖန်တီးဖို့ ကျွန်တော်တို့က ရေခဲထုတ်စက်တွေအတွက် အစိတ်အပိုင်းတွေကို သုတေသနပြုလုပ်ပြီး ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
High-quality stop valve
Images of the high-quality stop valve used for INox IVA Tube ice making machine
INox IVA ရေခဲထုတ်စက်အတွက် အသုံးပြုသော အဆင့်မြင့် ရပ်တန့်အဆို့ ပုံများ
Viet An’s Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) offersaremarkable energy-saving capacity. Let's imagineanew and an old ice-making machine with the same degree, then:
After just above two years, the old machine +2years of electricity cost will be equal or higher than the 100% new machine +2years of electricity cost. This does not include the expenses to resolve the errors during the operation with the old machine.
Typically, it takesamanufacturer from 13-20 million dongs to replace every new compressor. Even there are no errors during the first two years, until the 3rd year, the old machine will indeed operate much better than the old one.
With Viet An’s machines, if you follow our instructions, the appliances can operate smoothly up to 10 years without any strange incidents. With the above information, it’s your right to chooseanew or old machine.
Also, you will be offeredapackaging system for free.
ထို့အပြင် ထုတ်ပိုးမှုစနစ်ကို အခမဲ့ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The packaging system offers an amazingly quick and convenient operation. When buying the IVA 9T Industrial Tube Ice Making Machine (100% New), you will be givenapackaging system.
If you still decide to choose an old compressor withoutaliquid and gas separation system, an old condenser, old pump, and other components go to https://locnuocvietan.vn/san-pham-viet-an/may-lam-da-vien/
ထုတ်ပိုးမှုစနစ်က လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ IVA 6T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ထုတ်ပိုးမှုစနစ်လည်း ပေးဆောင်ပါတယ်။
Formerly known as Viet An General Trading Limited Company and equitized in August 2009, Viet An General Trading Joint Stock Company is the leading company in manufacturing, importing, and distributing the ice-making machines, RO purified water filtration systems, bottle filling machines, bottle blowing machines, etc.
Viet An General Trading Limited Company လို့ လူသိများခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ Viet An General Trading Stock Company လို့ပြောင်းလဲခဲ့ကာ ရေခဲထုတ်စက်များ၊ RO ရေစစ်များ၊ ဘူးလောင်းဖြည့်စက်များ၊ ဘူးမှုတ်စက်များ စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ရောင်းချတဲ့ နေရာမှာ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။
Asaleading enterprise with nearly 20 years of experience in importing, manufacturing, and distributing filling machines, bottle blowing machines, water filtration lines, manufacturing stainless steel ice machines, etc., we’ve always tried our best to apply the most advanced technology (American, European, Japanese technology) into the production. Thanks to our unceasing efforts, we have achieved various honorable prizes and certificates: Viet has been awarded various decent prizes and certifications, including:
ရေဘူးနဲ့ ပက်သတ်တဲ့ စက်တွေ ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာမှာ အတွေ့အကြုံရှိတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့က အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ ဂျပန်စတဲ့ ခေတ်မီနိုင်ငံများမှ နည်းပညာတွေကို ထုတ်လုပ်မှုမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မလျှော့တဲ့ ဇွဲကြောင့် ဆုများနဲ့ လက်မှတ်မျိုးစုံ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Gold Medal - Vietnamese High-Quality Goods awards (2009)
Gold Medal - Vietnam Leading Brands (2015)
ISO 9001:2015 certificate (2015)
ISO 9001:2015 လက်မှတ် (၂၀၁၅)
One of 100 small and medium enterprises to meet President Truong Tan Sang on December 1, 2016;
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ Truong Tan Sang နှင့် တွေ့ဆုံရန် လုပ်ငန်း အလယ်အလတ်နှင့် အသေးစား အခု ၁၀၀ တွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
Certificate of Viet Nam Association for Anti-counterfeiting and Trademark Protection (VATAP) for actively participating in the movement on November 29, 2016;
ဗီယက်နမ် ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ် အဖွဲ့အစည်းမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် လှုပ်ရှားမှုများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်သဖြင့် လက်မှတ် ပေးအပ်ခဲ့သည်။
One of 100 enterprises to receive Certificate of Merit President Tran Dai Quang on January 7, 2017;
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ Tran Dai Quang ထံမှ အကျိုးပြုလက်မှတ် လက်ခံရန် လုပ်ငန်း အခု ၁၀၀ တွင် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။
Golden Cup in the event honoring integration and development businesses on January 8, 2017;
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် ပူးပေါင်း ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် စီးပွါးရေး တိုးတက်မှုပွဲတွင် ရွှေဖလား ရရှိခဲ့သည်။
Official member of Hanoi Supporting Industries Business Association since October 2, 2018;
Golden Cup in the ceremony honoring and awarding of Thang Long Golden Brand - Outstanding Entrepreneur on November 18, 2018;
Certificate of Merit by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc for the individual collectives with outstanding achievements in implementing the tenth plenary session of the 7th Central Committee of the Communist Party of Vietnam (CPV).
Free shipping an installation nationwide Superior quality
နိုင်ငံအနှံ့ အခမဲ့ ပို့ဆောင် တပ်ဆင်ပေးပါတယ်။
Premium quality components made from 304 stainless steel
စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားသော ပရီမီယမ် ကွာလတီ အစိတ်အပိုင်းများ
High speed of ice-making
ကောင်းသော အေးစေသည့် စနစ်
Dedicated consultation team
တော်သော ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးသည့် အဖွဲ့
To know more details about the price of tube ice-making machines, ranging from mini machines to industrial machines, go to https://vietan.vn/may-lam-da-vien
Viet An isafamous brand in supplying industrial ice-making machines with the application of American technology. Our products are trusted and widely chosen by the customers in the market. We offerawarranty period of 12 months andalife long maintenance. Call us now at 0949.41.41.41 to get an incentive price for an IVA9T 9ton Stainless Steel Tube ice-making machine Thank you for being interested in our products.
Viet An သည် အမေရိကန် နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်များကို ပေးပို့တဲ့ နာမည်ကြီး ကုန်တံဆိပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဈေးကွက်မှ ဝယ်ယူသူများက ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အားပေးကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ၁၂ လ အာမခံချက်ပေးပြီး တစ်သက်တာ ထိန်းသိမ်းမှု ပေးပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် ၈ တန်ရေခဲထုတ်စက်ကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ဝယ်ယူဖို့ ၀၉- ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို စိတ်ဝင်စားပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
KL15 cold storage system
VAMĐ 12T Water filtration system
Hỏi đáp & đánh giá IVA 9T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)